Firenena 20 ambony indrindra manana tahan'ny vidim-piainana ambany indrindra eran-tany 2022 - Victor Mochere
Zoma, Jolay 1, 2022
Ahoana ny fomba hahazoana boky fianarana maimaim-poana
Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia fisondrotan'ny vidin'ny entana sy tolotra amin'ny toekarena. Ny fisondrotan'ny vidim-piainana dia fepetra midadasika, toy ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny na ny fiakaran'ny vidim-piainana ao amin'ny firenena iray. Metrika mivadibadika, fisondrotry ny vidim-piainana izay mety hiakatra sy hidina haingana arakaraky ny toe-karena sy ny fepetra nofidian'ny governemanta hifehy na hanoherana azy ireo. Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia mifamatotra amin'ny foto-kevitra ara-toekarena momba ny tolotra sy ny tinady ary azo jerena tsara na ratsy arakaraka ny toe-javatra manokana sy ny tahan'ny fiovana.
Ohatra, ny fiakaran'ny vidim-piainana kely dia heverina ho famantarana fa mitombo ny toekaren'ny firenena iray ary manana fidiram-bola sahaza ny mponina ao aminy, samy zavatra tsara. Na izany aza, ny fisondrotry ny vidim-piainana tafahoatra dia mitranga rehefa miakatra haingana kokoa noho ny karama ny vidiny, ka mahatonga ny vola ho very lanja. Lasa latsaka noho ny teo aloha ny sandan’ny vola tokana ary mihena ny fahefa-mividy ny volan’ny firenena. Mifanohitra amin'izany, ny fisondrotry ny vidim-piainana kely loatra dia mety ho famantarana mampiahiahy ihany koa fa mihantona ny toekaren'ny firenena iray ary tsy ampy ny olona manana asa.
Misy tondron'ny fisondrotry ny vidim-piainana telo: ny vidin'ny mpanjifa (CPI), ny vidin'ny ambongadiny (WPI), ary ny vidin'ny mpamokatra (PPI). Ny CPI dia fandrefesana mandinika ny vidin'ny antonony lanja amin'ny filana voalohany - toy ny fitaterana, sakafo ary fitsaboana - eo amin'ny sehatry ny mpanjifa/anintany. Ny WPI dia mandrefy sy manara-maso ny fiovan'ny vidin'ny mpamokatra na ny ambongadiny alohan'ny hahatongavan'ny entana amin'ny mpanjifa. Ny PPI dia fianakavian'ny metrika izay mandrefy ny fiovan'ny vidiny amin'ny fomba fijerin'ny mpivarotra/mpamokatra fa tsy ny mpividy/mpanjifa.
Ny fisondrotry ny vidim-piainana dia sokajiana ho karazany telo: ny fisondrotry ny fitakiana, ny fisondrotry ny vidim-piainana, ary ny fisondrotry ny vidim-piainana. Ireo telo ireo dia misy ifandraisany amin’ny fitovian’ny famatsiana vola sy ny famatsiana entana eo amin’ny toekaren’ny firenena iray.
Fisondrotry ny fitakiana – Mitranga rehefa mihamitombo haingana kokoa noho ny fahafahan'ny toekarena ny fitakiana entana sy serivisy – amin'ny teny hafa, ny fitambaran'ny vola sy/na fampindramam-bola holanian'ny olona. Be ny tinady nefa tsy maharaka ny tolotra ka miakatra ny vidiny. Ny fiakaran'ny vidim-piainana dia mahatonga ny mpividy sasany hiala amin'ny tsena, izay mampihena ny fangatahana ary mamerina indray ny fifandanjana eo amin'ny fangatahana sy ny tolotra.
Fisondrotry ny vidim-piainana - Mitranga vokatry ny fiakaran'ny vidim-pamokarana. Ohatra, raha mitombo ny vidin'ny akora ampiasaina hamoronana vokatra, dia miakatra ny vidin'ny vokatra farany rehefa ampitan'ny mpamokatra amin'ny mpanjifa ny vidiny.
Fisondrotry ny vidim-piainana – Mitranga noho ny fiandrasana ny hitohizan’ny fidangan’ny vidim-piainana, ka tsy maintsy miakatra ny karama mba hitazomana ny sata misy. Rehefa mitombo ny vidin'ny entana sy serivisy dia manantena ny hahazo karama bebe kokoa ny mpiasa mba hitazonana ny fari-piainany. Vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny asa dia mitombo ihany koa ny vidin'ny mpanjifa ho an'ny entana na serivisy vokarin'ny asa.
Ireo firenena manana tahan'ny vidim-piainana ambany indrindra eran-tany dia matetika manana tahan'ny vidim-piainana ratsy, izay antsoina hoe deflation. Mampitombo ny sandan'ny volan'ny firenena ny fanodinkodinana tampoka, izay ahafahana mividy entana sy tolotra betsaka amin'ny vola mitovy. Ny deflation amin'ny ankapobeny dia avy amin'ny toe-javatra mifanohitra amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny deflation dia mitranga rehefa mihoatra ny famatsiana ny vola misy eo amin'ny toekarena ny famatsiana entana sy serivisy, ka miteraka fihenam-bidy vokatr'izany. Mety hitranga ihany koa ny deflation rehefa mitombo ny fahefa-mividy noho ny fihenan'ny famatsiana vola sy/na ny fihenan'ny famatsiana crédit (izay samy manatsara ny sandan'ny vola efa misy).
Ireto ny firenena 20 ambony indrindra manana tahan'ny vidim-piainana ambany indrindra eran-tany.
Ny tahan'ny vidim-piainana
Toerana tsara indrindra hijerena na handefa sarimihetsika maimaim-poana